"APIRA": TILMAAMAHA LOO ISTICMAALO SHINNIDA - BEEKEEPING
In kaydsiga shinnida, daroogooyinka kala duwan ayaa badanaa loo isticmaalaa si loo kordhiyo tirada shakhsiyaadka iyo roogga ee apiary.
Maanta ka fikir midkood - daroogada "Apira".
Nidaamka, foomka sii deynta, macluumaadka guud
"Apira" - daroogo fududeynaya soo qabashada roodhida inta lagu guda jiro. Ku duubnaa dhalooyinka khafiifka ah ee balaastig ah oo 25 g ah, waa jelit cad. "Apira" waxaa loola jeedaa kooxda diyaargarowga ah ee loo yaqaan 'pheromone preparations for bees.
Ma taqaanaa? Bees waxay la xiriiraan midba midka kale iyada oo la adeegsanayo feeraha ay ka soo baxaan jirkooda iyo dhaqdhaqaaqa jirka ee gaarka ah, oo loogu yeero "shimbir dance".
Qaab dhismeedka waxaa ka mid ah:
Saliidda saliidda liin
Pheromones waxay saameeyaan habdhaqanka qoyska shinni, waxay leeyihiin saameyn kooxeed shaqsiyaadka shakhsiyadeed, soo jiidaya raxan iyo buulkaba. 5 maalmood gudahood kaddib marka la codsado, hawsha duulimaadka ee shinnida ayaa kor u kacda qiyaastii 28-37%, ukunta-qoynta - 10-50%, tirada guud ee dhalaanka ayaa sidoo kale kordhiya.
Waa muhiim! Daroogadu ma saamaynayso tayada malabku.
Qiyaasta iyo habka loo isticmaalo
Markaad isticmaasho "Apiro", waa lagama maarmaan inaad raacdo tilmaamaha si sax ah oo raac daraasadaha lagu taliyey.
Tixgeli "Apira" marka la eego isticmaalka haboon ee waxtar leh. Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad diyaariso xayawaanka oo waxaad dhigtaa tuubooyinka ku dhajiya dhulka. Waxaad sidoo kale ku rakibi kartaa duurka ama geedo fogaan ah 100-700 mitir oo ka soo jeeda apiary. Jel waxaa lagu dabaqayaa nacaybka oo dib u cusbooneysiiyaa maalin kasta inta lagu jiro xilliga firaaqada.
Waa muhiim! Rugta ayaa lagu rusheeyaa "Apiroem" si ay u qabsato rashka si fiican iyo deg deg ah.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa roevni, ka dibna gelitaanka waxaa la mariyaa mar. Laba jeer maalintii ayaa loo baahan yahay in la baaro. Marka dib loo isticmaalo xayawaanka ka dib markii loo wareejiyo roogga, rugtaas waxaa loo isticmaali karaa wax aan ka horeyn 10 maalmood.
Si aad u ilaaliso shinni ka shilinta isticmaalka daroogada "Bipin".
Diyaarinta diyaarinta "Apira" raacitaanka qiyaasta:
1 g (wareega 1 cm ee dhexroorka) ee gelinta waxaa loo adeegsadaa maalin kasta si loo qoro.
Bilowga, 10 g ee diyaarinta waxaa lagu dabaqayaa hal mar gudaha.
Dhibaatooyinka iyo iska horimaadyada
Markaad isticmaasho "Apiroya" wax saameyn ah ama cilad-celin ayaa la sameeyaa.
Ma taqaanaa? Kaliya kala badh ka mid ah oo dhan shinni rugta ururiyaan nectar. Inta soo hartey waxay ku hawlan yihiin "arrimaha gudaha": soo saarida malab, dhismaha malab cusub, dhalmo.
Xaaladaha kaydinta iyo nolol maalmeedka daroogada "Apira"
Ku kaydi daawada waa in ay ahaato heerkul ah 0 ° C ilaa + 25 ° C meel madow oo qalalan. Nolosha sheyga laga bilaabo taariikhda wax soosaarka waa 2 sano.